"Education for Myanmar Youths": ရန်ပုံငွေကိစ္စ
: Contributor - ဂျစ်တူး, General Discussions
Myanmar Students - Chiang Mai University said...
But aid for education is, sometime, can be complicate procedure. Anyway, we should start it.
ဂျစ်ရေ သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ ဒီဘက်မှာ တော့ NGOs proposal နဲ့ သွားနေကြတာများတယ်။ အတွင်းထဲကို တော်တော်များများလှမ်းနေကြတာတွေ ရှိတယ်။ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ ဗမာတွေရဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လှူဒါန်းတာကပိုကောင်းတာပေ့ါ၊ နှောင်ကြိုးကင်းတယ်။